Yahoo! Search Marketing ... Ungilahlile! | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 27, 2007 NgoLwesibili, Novemba 27, 2007 Douglas Karr
I-Direct Mail iyindlela ephakathi ebizayo. Ngoba kuyabiza, akunakwenziwa ngokungafanele. Ngangivame ukutshela amaklayenti ami ukuthi ithuba lokuthola ukunakwa kothile nge-Direct Mail lihlobene ngqo nebanga eliphakathi kwebhokisi labo leposi nomgqomo wabo kadoti. Ukuphela kwengxenye yomkhankaso weposi oqondile obaluleke kakhulu kunenhloso kanye nocezu yikhono lokwenza emkhankasweni.
Namuhla, ngithole isiqeshana esenziwe kahle se-Direct Mail kusuka ku- Yahoo! Ukucinga Marketing. Ukunikezwa bekuyisikweletu esingu- $ 75 maqondana nokumaketha kwamagama asemqoka ku- Yahoo! injini yokusesha. Njengoba ngisanda kwethula i- ingosi yokuxhumana nabantu yamaNavy Veterans, Bengilokhu ngenza ukuhlola okuthile ngegama elithile elingukhiye.
Ukuphrinta okuhle, kunjalo, ukuthi udinga ukufaka idiphozi engu- $ 30 engabuyiselwa ku-akhawunti. Lokho kusekhona ukuchofoza okungama- $ 45 ebengingakusebenzisa, noma kunjalo, ngakho-ke ngazama ukubhalisa. Ngithi wazama ngoba ngihlangatshezwe yilo mlayezo wephutha hhayi ngaphansi kwezikhathi ezi-4 kunqubo yokubhalisa nokukhokha:
I-Direct Mail inento eyodwa efana nanoma yikuphi ukukhangisa. Kufanele ukwazi ukuletha umkhiqizo noma isevisi yakho ngokushesha nje lapho okulindelwe kudlula emnyango. Ukungakwazi ukuletha kwenza umonakalo omkhulu kunokungakhangisi nakancane. Ngiyethemba ukuthi le Yahoo! Umkhankaso bekungumkhankaso oyisampula othunyelwe kubantu abambalwa ukuhlola ikhono lohlelo lwabo ukuphatha ukubhaliswa nokuthengwa… kepha iqiniso kungenzeka liphambene nalokho. Bangilahlile! Ngemuva kwemizamo emi-4, angibuyi.
Yahoo! kungenzeka ukuthi usebenzise amakhulu ezinkulungwane zamaRandi kule ngxenye yeposi eqondile. Futhi noMqondisi Okhangayo ompofu, owaklama isiqeshana esihle, kungenzeka asolwe ngokusebenza kabi komkhankaso.
Ngaphandle kokuthi, kunjalo, Yahoo! kwenzeka ukufunda ibhulogi yami. 🙂
Tags: i-actonumkhothoziinkampani ezisebenzisayo yokumakethaabahlinzeki bemishini yokuthengisaizilinganiso zokuzenzakalela zokumakethaukumaketha umbiko we-automationukubuyekeza ezishintshayoukuhlolwa kwe-multivariateukuhlolwa kwekhasingqo ekuhlanganyeleni
Ukuzijabulisa namaLogo… Izitolo zekhofi ze-Indy
Nov 27, 2007 ngo-10: 37 PM
Ngiyamangala njalo lapho izinkampani ezinkulu zijija izinto kanjena. Banenhlanhla ubanikeze amathuba amane, iningi labantu belizoma okokuqala noma okwesibili. Ngeshwa "kumfana omncane" uma senza iphutha elifana naleli, amakhasimende ethu angahle abe nokuqabukela asinike ithuba lesibili.
Nov 28, 2007 ngo-11: 59 AM
Yebo, kepha iDirect Mail iyabiza kuphela uma ingenziwa kahle. Uma ngabe yenziwe kahle, khona-ke kungabiza ngempumelelo. Kungabiza imali eningi kunokuthile okushibhile / kwamahhala njengokumakethwa kwe-imeyili, kepha kuvame ukuphumelela kakhulu. Iyalinganiswa, iyenzeka ngezifiso, futhi ingahlolwa. Ake sibone umsakazo noma i-TV ikwenza lokho. (Usho njalo uchwepheshe we-DM! 😉)
Nov 28, 2007 ngo-12: 47 PM
Ngiyavuma! Bekufanele ngabe ngithi 'utshalomali olubalulekile' kunokuthi 'kuyabiza'. Akuzona izindleko uma zenziwe kahle futhi zisiza ukushayela imali eningi. Heck, ngangikulungele, ngizimisele, futhi ngikwazi ukuphendula kule ngxenye!
Nov 29, 2007 ngo-11: 54 AM
Amazwana amahle. Iqembu lezokumaketha lakwaYahoo lisanda kulahlekelwa abantu abaningi abahle kakhulu kuma-startups nabancintisana nabo. Bengihlala ngicabanga ukuthi omunye wezazi ezinhle kakhulu zokukhangisa nguJay Abraham - mhlawumbe kufanele bamshayele ucingo.